Ishidi bumbela insimbi - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ishidi lokucubungula izinsimbi zensimbi-OEM China Sheet metal Parts Manufacturer
Ngenxa yonjiniyela abanolwazi abangu-10 namasethi emishini esezingeni eliphakeme engaphezu kwengu-30, u-Ouzhan muhle ekwazini indlela embonini yensimbi yensimbi iminyaka engu-15. I-Ouzhan ikusiza ukucubungula ukwakheka komkhiqizo wakho nge-DFM futhi iqinisekise ukuthi izingxenye zakho zensimbi zingenziwa ngokunembile, kahle, nangekhwalithi efana nokucaciswa kwakho. Sikholelwa ngokuqinile ekwenzeni ikhwalithi yekhwalithi ye-welding ukwenza lula ukulawulwa kwezinqubo. I-ERP yethu isenza sikwazi ukuphatha ukukhiqizwa kwangaphakathi kwemikhiqizo eqediwe ngama-SKU amaningi.
Umkhiqizo wethu onzima kakhulu owenziwe kuze kube manje wenziwe ngezinto ezingama-320. Sinamakhono aqinile wokukhiqiza izingxenye zensimbi eziyinkimbinkimbi, ezinemba kakhulu. Olayini bethu bomhlangano abane bayakwazi ukuxhasa izinqubo zesibili nokuqedela ezifana nokushisela, i-riveting, i-powder enamathela, i-anodizing, ne-Assembly. Siyakwazi futhi ukuhlinzeka ngenkonzo esezingeni eliphansi noma ukuletha imikhiqizo eqediwe.
Ouzhan Precision Sheet Metal Icubungula Amandla:
OuZhan unekhono ukuhlinzeka engabizi ngezifiso amashidi bumbela amasevisi kanye nemikhiqizo high ngokunemba izinga inani elikhulu amaphrojekthi.
- Izinsizakalo zokwenziwa kwensimbi ezenziwe ngezifiso ezinama-oda aphakathi kuya phezulu.
- Uhla olubanzi lwezinto zokuzithandela zensimbi.
- Uhla olubanzi lobukhulu obuthambile (0.5mm-20mm).
- Amasethi amaningi wemishini esezingeni eliphakeme kanye nohlelo lokulawula oluphakeme.
- Ubuchwepheshe obuhlukahlukene nobuchwepheshe bokucubungula.
- Ukukhiqiza okuqinile nesikhathi sokulethwa okusheshayo.
Kungani Khetha Ouzhan Sheet Metal Fabrication Services
• I-Laser Cutting CO2 ne-N2
• CNC Ishidi Ukugoba 4 & 6 Axis
• TIG, MIG, Wokushaya
Ukushisela Irobhothi (I-ABB Robot 1410 enesistimu yokushisela kaFronius)
• I-Jig eyenziwe ngokwezifiso
2. Multiple Secondary Process amakhono
Ngaphezu kokushintshwa kwensimbi yensimbi, sisebenza ngokukhethekile ku-TIG naku-MIG, ekushiseni kweRobhothi, kwe-Spot Welding, ku-CNC Sheet Bending, ku-Riveting, ku-PEM, ku-Laser Etching, njll.
Sinabanjiniyela abayi-10 esikhungweni sethu se-R & D, bonke bangodokotela noma oprofesa base-University of Science and Technology of China. Singahlinzeka ngemidwebo yensimbi yensimbi enobungcweti kanye nezinsizakalo zokucubungula izinsimbi.
Sinezisebenzi zokuhlola ikhwalithi yobuchwepheshe nezinsizakusebenza, ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba kwimikhiqizo yakho ukuze uvivinye, bese ukhipha umbiko wokuhlolwa oningiliziwe wezingxenye zensimbi zamakhasimende.
Osayizi ngezifiso kanye bobunjwa ayatholakala. Uyemukelwa ukwabelana ngemidwebo yakho yezingxenye zensimbi yakho nathi, masisebenzisane ukwenza impilo ibe nobuciko ngokwengeziwe.
Kuyini Ukusebenza Kweshidi Lensimbi nokuthi Kusebenza Kanjani I-Sheet Metal Works
Ishidi lensimbi akuyona into ethile. Kunalokho, leli gama lisetshenziselwa izinsimbi ezakhiwe zaba isimo. Njengomthetho, ishidi lensimbi linesimo esingunxande. Kuyisici futhi ukuthi ukushuba kweshidi kungaphansi kakhulu kobude nobubanzi balo.
Ngaphezu kwensimbi, ezinye izinsimbi eziningi ezifana nethusi, i-aluminium negolide kanye nama-alloys ethusi kungacutshungulwa kube yinsimbi. Ukuze kucutshungulwe kube yinsimbi, noma kunjalo, izinto ezisetshenzisiwe kufanele zibe nezici ezithile, okusho ukuqina nokuqina okuthile, futhi-ke kube yi-ductile, okusho ukuthi kuyakheka. Lezi zidingo zibangela imikhawulo maqondana nezinto ezingasetshenziswa. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukucubungula izinto eziqine kakhulu noma eziqinile ngokwedlulele zibe yinsimbi yensimbi.
Ngokusho kwalokhu, ishidi lensimbi ngumkhiqizo oqedile ukwenziwa ongakhiqizwa endaweni enkulu, lapho amashidi ngokuvamile ekhanya, emncane, ezinzile, enwebeka futhi eyisicaba. Ngenxa yalokhu kucaciswa, zilungele zonke izinhlobo zokugqokwa nokwembozwa. Ngaphezu kwalokho, ishidi lensimbi lingakhubazeka ngezindlela eziningi, okungukuthi lingashiselwa, ligotshwe, lishaywe ngezibhakela noma lisikwe. Izinhlobo ezahlukahlukene zokwakheka zingenziwa ngensimbi, yingakho isetshenziswa njengesiqalo semikhiqizo ehlukahlukene.
Igama elithi "sheet sheet processing" lihlanganisa inombolo enkulu yezinqubo zokukhiqiza. Ngokuyinhloko, igama elithi sheet sheet working lisho ukwenziwa kwemikhiqizo, izingxenye nezingxenye ezenziwe ngensimbi. Ngaphezu kokushisela, ukusika nokugoba, izinqubo zokucubungula ishidi zensimbi zifaka phakathi ukubhoboza, ukwakha, ukuzigingqa nokujoyina. Ukwakhiwa kwensimbi yeshidi kuvame ukufakwa ekusetshenzisweni kwensimbi, ngezigaba ezilandelayo:
• Ukwakhiwa kwensimbi
• Ukwakheka kongqimba
• Ikhoyili yokushisa
• Ukugoba isibhakela
• Ukuzisika kwe-Laser
• Ukulungiswa kwe-Laser
Ngaphakathi kohlaka lokucutshungulwa kwensimbi, amashidi athambile futhi amelana nawo angakhiqizwa, lapho izici ezahlukahlukene zitholwa ngama-alloys ahlukile. Isibonelo, kunezinto eziningi ezingangezelwa ensimbi esimweni soketshezi ngesikhathi sokusebenza kwensimbi nezinquma izinto ezibonakalayo zensimbi yensimbi ekhiqiziwe. Ngaphezu kwe-silicon, i-nickel ne-chromium, lezi zinto zifaka phakathi i-titanium, ithusi, i-niobium ne-molybdenum.
Izinto zokucutshungulwa kwensimbi yeshidi - Izinto ezisetshenziselwa umshini wensimbi ye-Sheet
Izinto ezitholakalayo ze-Sheet Metal machining
• I-Aluminium 5052H
• I-Aluminium T5, T6
Insimbi Ebandayo Ebandayo (CRS, SAPH440)
Insimbi Esongwe Eshisayo (HRS)
Insimbi Engagqwali (SS304, SS316, SS301)
I-Ouzhan Sheet Metal Fabrication Surface Iqedile
Nayi inketho ebanzi yensimbi yokuqedela izinsiza ongazikhethela izingcezu zensimbi ezakhiwe ngomshini ukuze uthuthukise ukubukeka kwezingxenye, ubushelelezi bendawo, ukumelana nokugqwala, nezinye izici: